Photocall TV: कसरी एक क्लिक भन्दा बढि १,००० भन्दा बढी च्यानल नि: शुल्क हेर्न Androidsis
Photocall TV: कसरी एक हजार भन्दा बढी च्यानलहरू एक भन्दा बढि क्लिकको साथ नि: शुल्क हेर्नका लागि
दानीप्ले | 09/07/2021 10:47 | हाम्रो बारेमा
स्ट्रिमि ofको खपत विगत केही वर्षहरूमा बढ्दो छ। सबै प्रकारका सामग्री हेर्न आज धेरै सेवाहरू उपलब्ध छन्, यो श्रृंखला, वृत्तचित्र र चलचित्रहरू, साथै शर्टहरू र क्लिपहरू जुन लाखौं व्यक्तिहरूको रूचि हो।
एउटा प्लेटफर्म जुन हालसालैका महीनहरूमा es Photocall TV मा अनुयायीहरू प्राप्त गर्दै छन्, एक उत्तम समाधान यदि तपाईं यसमा क्लिक गरेर कुनै पनि च्यानल हेर्न चाहनुहुन्छ भने। थप रूपमा, यस पृष्ठमा स्पेनको सबैभन्दा प्रख्यात रेडियो स्टेशनहरूमा पहुँच छ, विदेश र केही अज्ञात।
1 Photocall.tv के हो?
2 कसरी Photocall.tv काम गर्दछ
3 उपलब्ध च्यानलहरू
4 सबै प्रकारका उपकरणहरूका लागि उपयुक्त
5 Photocall TV गुणवत्ता
6 फोटो कल टीवीमा विकल्पहरू
7 प्लूटो टिभी, एक चाखलाग्दो विकल्प
8 कोडी, एक मल्टिमेडिया केन्द्र विभिन्न विकल्पहरूको साथ
Photocall.tv के हो?
यो एउटा वेब पृष्ठ हो जुन स्पेन, युरोप र अमेरिकी महादेशका च्यानलहरूको उत्सर्जनको लागि हो, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई च्यानल तस्विरमा सिधै च्यानल हेर्नका लागि सजिलो बनाउँदछ। एकचोटि तपाईंले कुनै एक च्यानलमा क्लिक गर्नुभयो यसले तपाईंलाई सिधा लिंक देखाउँदछ प्रसारणमा जान।
यो अन्तर्राष्ट्रिय देखि विभिन्न श्रेणिको सबै भन्दा राम्रो स collecting्कलन टेलिभिजन को एक मानिन्छ त्यहाँ एक धेरै विविधता छ, को लागि 1.000 च्यानल प्रदान। Photocall.tv प्राय: नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन्छ, या त लामो सूचीमा च्यानलहरू थपेर, तर प्रयोगकर्ताहरूले प्राय: रिपोर्ट गर्ने त्रुटिहरूलाई सच्याएर।
यसमा श्रेय दिन सकिने केही कमजोरीहरूमध्ये एउटा यो हो कि यो कोटीहरू द्वारा क्रमबद्ध गरिएको छैन, यसको बाबजुद पनि, प्रत्येकले आफ्नो नाम देखाउँदछ जुन द्वारा यो चिनिन्छ। ट्याबहरू राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, अन्य (विविध च्यानलहरू) हुन्, रेडियो (धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्टेशनहरू सहित), गाइड, जानकारी र VPN। लाइट विकल्पले कालो टोनलाई सेतो र प्रकाशको रूपमा चिनिने संस्करणमा परिवर्तन गर्दछ।
कसरी Photocall.tv काम गर्दछ
Photocall TV को अपरेशन एकदम सरल छएक पटक तपाईले टेलिभिजन स्टेशनको छविमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले धेरै लिंकहरू देखाउँदछ, कम्तिमा एक वा धेरै धेरै। ती मध्ये पहिलो सामान्यतया प्रसारणको प्रत्यक्ष एक हो, बाँकी प्राय: जानकारीमूलक हुन्छ, या त गाईड वा वेब भित्रका अन्य प्रकारका सामग्रीहरू देख्ने सम्भावना।
एकचोटि तपाईंले च्यानल लाइभ खोल्नुभयो भने यसले तपाईंलाई कुनै पनि भिडियो प्लेयरको बिभिन्न विकल्पहरूको साथ फोटोकल टिभी पृष्ठमा लैजान्छ। यदि, उदाहरण को लागी, तपाइँ «La 1 open खोल्नुहुन्छ, तपाइँसँग तल गुण छ उत्सर्जन, भोल्यूम, न्यूनतम गर्न विकल्प र एक अधिकतम स्क्रीन।
केहि धेरै टेलिभिजन नेटवर्कमा फिल्महरू हेर्न विकल्प छ, तिनीहरू प्रत्येक द्वारा प्रस्ताव गरिएको सामग्रीमा जान सबैलाई धन्यवाद। यो काममा आउँदछ जुन हामी ती विषयहरूलाई पार गर्न चाहन्छौं जुन हामीलाई कुनै रूचि छैन, सामान्यतया यो धेरै जसो केसहरूमा हुन्छ।
फोटोकल टिभीले प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि पहुँच योग्य च्यानलहरूको ठूलो सूची थप गर्दछ, जुन आज हजारौं व्यक्तिहरू छन्। ती मध्ये स्पेनको स्वायत्त च्यानलको कुनै कमी छैन, जसमध्ये क्यानाल सुर, TV3, टिभी गलिसिया अलग देखिन्छ, साथै अन्टेना,, टेलिकिनको, TVE-१, ला सेक्स्टा र अन्य धेरै सहित अन्य राष्ट्रियहरू।
त्यहाँ फ्याक्टोरिया डे फिसिन र ए Series श्रृंखला, खेलकूद जस्ता श्रृंखलाहरू हेर्नको लागि केहि सूचीहरू छन्, जसमा गोल टेलेभिजन, रियल म्याड्रिड टिभी, बरिया टिभी, लस पाल्मास टिभी, बेटिस टिभी र सेविला एफसी टिभीको कुनै कमी छैन। थप रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय सेक्सनमा विविधता धेरै लामो जान्छ।, त्यहाँ केहि ठूला नामहरू जस्तै सीएनएन, फक्स, बीबीसी, यूरो न्यूज, साथ साथै १ 150० भन्दा बढी बिभिन्न च्यानलहरू छन्।
पहिले नै «अन्य in मा च्यानलहरूको एक महान विविधता छचाहे तिनीहरू खेल वा अन्य थिमहरू हुन्, केही महत्त्वपूर्णहरू जस्तै एएमसी, साइफाइ, भेभो (संगीत च्यानल), रेड बुल टिभी, एनएफएल, मोटो जीपी र सय भन्दा बढी टेलिभिजनहरू उल्लेख गर्नु आवश्यक छ। कसैसँग सामान्यतया पृष्ठमा सामग्री अवलोकनको विकल्प हुन्छ, जबकि अरूले आधिकारिक पृष्ठमा पठाउँछन्।
यदि तपाईं रेडियो स्टेशनहरू सुन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, Photocall टिभीले उत्कृष्ट १२० फरक प्रसारणको रूपमा दिन्छ, कि राजनीति, खेल र अन्य विविधताको बारेमा कुरा गर्दै। यूरोपा एफएम, कोप, ओन्डा सिरो, Cadena सेर, esRadio, Radiolé, Melodía FM र लगभग 200 अन्य जस्ता श्रृंखलाहरू केवल एक क्लिकमा उपलब्ध छन्।
सबै प्रकारका उपकरणहरूका लागि उपयुक्त
अहिलेको लागि फोटोकल टिभी सेवा वेब मार्फत उपलब्ध छयसको कुनै अनुप्रयोग छैन र सबै स्मार्टफोनहरू, ट्याब्लेटहरू, कम्प्युटरहरू र स्मार्ट टिभीको साथ प्रयोगयोग्य छ। यसलाई प्रयोग गर्नको लागि तपाईले सबै केसहरूमा ब्राउजर प्रयोग गर्नुपर्दछ, ती पृष्ठहरूसँग उपयुक्त कम्पनीहरूमा गुगल क्रोम हो।
क्रोममा जस्तै, यो मोजिला फायरफक्स, एज, ओपेरा सहित अन्य प्रसिद्ध ब्राउजरहरूसँग उपयुक्त छ, जबकि यसले सफारीमा काम गर्दछ। वेब द्रुत लोड हुन जान्छ, तपाईंसँग गति हुनु आवश्यक छ छिटो र स्थिर जडान, उच्च गुणवत्तामा टेलिभिजन हेर्न सिफारिस गरियो।
पृष्ठले कालो टोनलिटी देखाउँदछ, जबकि प्रकाशको रूपमा चिनिने संस्करणसँग यो धेरै हल्का छायामा परिवर्तन हुन्छ, विशेष गरी सेतो। यसको सरलताको बावजुद फोटोकल टिभी निस्सन्देह पूर्ण रूपले एक हो, डीटीटी च्यानलहरू प्रतिस्पर्धाको रूपमा, यद्यपि यसले प्रायः क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सामग्री प्रस्ताव गर्दछ।
यदि यो पर्याप्त भएन भने, फोटोकल टिभी फोनबाट स्क्रीनमा सुरू गर्न सकिन्छ, उच्च रिजोलुसनमा उत्कृष्ट गुणको प्रस्ताव राख्दै। VPN मा प्रसिद्ध VPNs मार्फत यो सेवा सम्झौताको विकल्प छती मध्ये एक्सप्रेसभीपीएन, साइबरघोस्ट, NordVPN र HolaVPN हुन्।
Photocall TV गुणवत्ता
सबै च्यानलहरूको गुणवत्ता वास्तवमा सभ्य छ, इन्टरनेट जडान प्रयोग गर्दछ, यो सँधै एक वाईफाई कनेक्शन को उपयोग गर्न को लागी सिफारिश गरीन्छ मोबाइल नेटवर्क बाट मेगाबाइट्स खेर फाल्न को लागी। सबै च्यानलहरूले एक महत्त्वपूर्ण रिजोलुसन देखाउँछन्, यदि प्रयोगकर्ताले सबै प्रकारका च्यानलहरू हेर्न चाहन्छन् भने यो परिवर्तनशील हुन्छ।
यसले फोटोकोल.टीभी ठेगाना लोड गरे पनि सबै आधिकारिक ठेगानाहरूसँगको सम्बन्ध देखाउँदछ, प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरू त्यो सटीक क्षणमा के हेर्न चाहन्छन् भनेर प्रदान गर्दछ। केहि च्यानलहरू हाल KK गुणवत्तामा प्रसारण हुन्छन्, तर प्राय 720 सम्म 1080p को गुणहरुमा पुन: उत्पादन।
फोटो कल टीवीमा विकल्पहरू
आज Photocall TV को विकल्प खोज्नुहोस् च्यानलहरूको ठूलो सूची हेर्न लगभग असम्भव छ, प्लेटफर्मले प्राय जसो केसहरूमा सिधा च्यानलहरू बजाउँदछ। केहि अनुप्रयोगहरूले च्यानलहरूमा सीधा लिंकको प्रयोग गर्दछ।
यस सेवाको उत्तम विकल्प मध्ये एक टीडीटी च्यानलहरू हो, अनुप्रयोग प्ले स्टोरमा उपलब्ध छैन, विकल्प मात्र हो यो आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न। च्यानलहरू सबै डीटीटी हुन्, थप गर्नुको साथै अरू क्षेत्रहरू जुन विभिन्न क्षेत्रको प्लेटफर्ममा छैनन्।
डीटीटी च्यानलहरू बाहेक, फरक च्यानलहरूका अनुप्रयोगहरू उपलब्ध छन्, यो सधैं तिनीहरू मार्फत सबै सामग्री अवलोकन मा निर्भर गर्दछ। तपाईं प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुनेछ, प्रतिस्थापन कार्यक्रमहरू र विशेष सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं दर्ताको साथ प्रीमियम जानुहुन्छ।
उस्तै पृष्ठको लागि हेर्दै, फोटोकल टिभीसँग समानताका एक मात्र टेलेरेक्टो हो, यद्यपि यसले कम च्यानलहरूको सूची देखाउँदछ। यो राम्रोसँग कार्य गर्दछ प्रत्येक च्यानललाई सिधा जडान गर्दा, दुबै गुण र फरक विकल्पहरू देखाउँदै।
Photocall TV का सबै भन्दा राम्रो विकल्प
प्लूटो टिभी, एक चाखलाग्दो विकल्प
समय बृद्धि भएको प्लेटफर्म मध्ये एक प्लूटो टिभी हो, यसको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो सीधा र कटौती बिना काम गर्दछ। यो बहु च्यानलहरूको सेवा हो, जसमा तपाईं स्पेनिश भाषामा सबै प्रकारका चलचित्रहरू, वृत्तचित्रहरू, श्रृंखला र कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुनेछ।
गाईडले तपाईलाई सबै कुरा देखाउँदछ ताकि तपाईले दैनिक रूपमा प्रदान गर्ने कुनै पनि सामग्री छोड्ने छैन, मागमा सामग्री हुनु बाहेक, जब हामी चाहन्छौं चलचित्र हेर्ने सम्भावना सहित। एक महत्त्वपूर्ण सुविधाको रूपमा प्लूटो टिभी मिथिकल श्रृंखला प्रसारण गर्ने च्यानलहरू बाहेक एमटीभी जस्ता ठूला कम्पनीहरूसँग यसको सम्झौता छ।
प्लूटो टिभीको व्यक्तिगत कोटीहरू छन् त्यसैले हामी केहि पनि छुटाउँदैनौं, बच्चाहरू साना बच्चाहरूका लागि घर, संगीत र खेलकुद च्यानलहरू र अन्य धेरै भेरियन्टहरूमा देखाउन विकल्प प्रदान गर्दै। यो बिभिन्न विकल्प हो र यसको लागी एक शर्त छ कि यदि हामी जारी राख्दछौं भने यसले हामीलाई उत्कृष्ट तरिकामा हुकनेछ।
कोडी, एक मल्टिमेडिया केन्द्र विभिन्न विकल्पहरूको साथ
यदि तपाईं एक मल्टिमेडिया केन्द्र मार्फत च्यानलहरू प्ले गर्न चाहनुहुन्छ भने, उत्तम विकल्प कोडी प्राप्त गर्नु हो, एक लोकप्रिय अनुप्रयोग जुनसँग अन्य सेवाहरूसँग कनेक्ट हुन। कोडीले तपाईंलाई स्रोतहरूमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ, उदाहरणका लागि प्लूटो टिभी, अमेजन प्राइम भिडियो, रकुतेन टिभी, र आईपीटीवी लगायत अन्य स्रोतहरू।
कोडीको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि यो क्रस-प्लेटफर्म हो, सबै अपरेटि systems प्रणालीहरूमा रहेको, एन्ड्रोइड, आईओएस र स्मार्ट टिभीमा अनुप्रयोगको रूपमा स्थापना योग्य। यो कुनै पनि ठाउँमा लिने अनुप्रयोग हुन सक्छ, प्लेयरको कारणले यो सामान्यतया चलाउँदछ र कुनै पनि सेवाहरूमा छिटो जोड्दछ।
फन्टहरू थप्नाले यसलाई बहुमुखी बनाउँदछ, अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो तिनीहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने बारे जान्दै गर्दा यसलाई एन्ड्रोइड प्रणालीको साथ स्मार्ट टिभी बक्समा सबैभन्दा पूर्ण, कार्यशील बनाउनेछ। च्यानलहरूको सूची असीम हुने छ, किनकि तपाईं सबैभन्दा लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानलहरू सिधा जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
कोडीका धेरै विकल्पहरू मध्ये एउटा यो हो कि यो पेनड्राइभबाट फाईलहरू प्ले गर्न सक्षम छ, यो अडियो र भिडियो फाईलहरू, साथ साथै लाइब्रेरीहरू हुन। कोडी प्लेयर एक महत्वपूर्ण मल्टिमेडिया केन्द्र हो र ती मध्ये एउटा जुन तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं सर्भरहरूमा जडान गरेर द्रुत रूपमा सामग्री हेर्न चाहनुहुन्छ भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » Photocall TV: कसरी एक हजार भन्दा बढी च्यानलहरू एक भन्दा बढि क्लिकको साथ नि: शुल्क हेर्नका लागि
Android को लागी best उत्तम ping pong खेल